mairie-antananarivo – « Opération coup de poing » Fanadiovana tanàna
administrateur 25 septambra 2018 Commentaires fermés
Natomboka ny alatsinainy 24 Septambra 2018 teo amin’ny tsenan’Anosibe ny « opération coup de poing » entina hanadiovana ny tanàna. Izany hetsika izany no natao dia hanalàna ireo fako mivangongo eto Antananarivo Renivohitra ary indrindra koa mba hisorohana ny fidiran’ny valan’aretina Pesta izay efa mananontanona eto amin’ny tanàna.
Dabam-pako lehibe na 235 bacs à ordures izay miparihaka ao amin’ireo boriboritany enina eto Antananarivo no hodiovina ary haharitra eo amin’ny herinandro eo ho eo ny fanatanterahana ny asa. Fiarabe sy fitaovana maro no ampiasaina amin’izany. Mandritra izany ihany koa dia misy ny famendrahana fanafody entina hamonoana ny valan’aretina isan-karazany.
Izany hetsika izany dia vokatry ny fifanomezan-tanana eo amin’ny Commune Urbaine Antananarivo (CUA), ny SAMVA, ny Minisiteran’ny Rano sy ny fidiovana, ny BNGRC, ary eo ihany koa ireo Région eto Analamanga sy ny manodidina azy.